Chinja Yekare PST Faira muNew Outlook 2003 Unicode Fomati - Nhanho-nhanho Nongedzo
musha Products DataNumen Outlook Repair Chinja Outlook 97-2002 PST Faira kuita Outlook 2003-2010 Unicode Fomati
kushandisa DataNumen Outlook Repair kushandura Outlook 97-2002 PST Faira muNew Outlook 2003-2010 Unicode Fomati
Ongorora: Iwe unofanirwa kuve neAptlook 2003 kana yepamusoro shanduro dzakaiswa kuti ushandise iri gwaro
Kubva Outlook 2003, itsva PST faira fomati inounzwa iyo ine zvakawanda zvakawanda zvakanakira kupfuura yekare. Kune vashandisi vekupedzisira, iyo most zvakakosha ndeizvi:
Tsigira Multi-mutauro Unicode
Kwete 2GB kukamurwa muPST saizi saizi
Kwete 65,000 kukamurwa (kana gumi nematanhatu emamwe mavhezheni ekutanga) muhuwandu hwezvinhu pafolda
Nekuda kweiyo yekutanga, fomati nyowani inonzi zvakare Fomati yeunicode zvakajairika, nepo fomati yekare ichidanwa ANSI fomati saizvozvo. Mazita ese ari maviri anoshandiswa mukati megwara rino. Sezvo mazuva ano data rekutaurirana rinowedzera nekukurumidza, kubviswa kwemipimo paPST faira kwakakosha kwazvo kune vashandisi. Naizvozvo, isu tinokurudzira zvikuru kuti uchinje mafaira ako ekare eAnsi PST muiyo itsva Unicode fomati Zvakare, izvi zvakare ndizvo mhinduro yakanakisa yedambudziko rakakura re2GB PST faira.
Microsoft haina kugadzira chishandiso chinogona kuita shanduko. Asi usazvidya moyo. DataNumen Outlook Repair anogona kukuitira izvi.
Cherechedza: Usati washandura yekare ANSI PST faira ine DataNumen Outlook Repair, ndapota vhara Microsoft Outlook uye chero mamwe maapplication anogona kuchinja iyo PST faira.
Sarudza iyo yekare ANSI PST faira sosi yePST faira kuti igadziriswe.
Sezvo PST faira iri mune yekare Outlook 97-2002 fomati, ndokumbira utaure yayo fomati fomati ku "Outlook 97-2002" mubhokisi re combo padivi peinobva faira hodhi bhokisi. Kana iwe ukasiya fomati se "Auto Kutsunga", ipapo DataNumen Outlook Repair ichaongorora iyo PST faira rekuti uone fomati yayo otomatiki Nekudaro, izvi zvinotora nguva yekuwedzera uye hazvina basa.
Sezvo isu tichida kushandura iyo ANSI PST faira kuita Unicode fomati, isu tinofanirwa kusarudza fomati yeiyo yakashandurwa PST faira ku "Outlook 2003-2010" mubhokisi re combo padivi peiyo yakashandurwa faira edit bhokisi. Kana iwe ukaisa fomati ku "Outlook 97-2002" kana "Auto Kutsunga", saka DataNumen Outlook Repair inogona kukundikana kugadzirisa uye kushandura yako ANSI PST faira.
Ndokumbira utarise kuti unofanirwa kuve neAptlook 2003 kana yepamusoro vhezheni yakaiswa kuti iyo faira ishandurwe zvinobudirira.
Baya bhatani, uye DataNumen Outlook Repair kuda start kuongorora uye kushandura sosi ANSI PST faira. Kufambira mberi kubhawa
Mushure meichi chiitiko, kana iyo sosi ANSI PST faira ikashandurwa kuita nyowani Unicode PST faira zvakabudirira, iwe uchaona iro meseji bhokisi rakadai
Iye zvino iyo nyowani yakashandurwa PST faira iri muiyo Unicode fomati, iyo inogona kuvhurwa neMicrosoft Outlook 2003 kana yepamusoro shanduro.
Chinja Outlook 97-2002 PST Faira kuita Outlook 2003-2010 Unicode Fomati